Waxyeellada Dalxiiska Meksiko ee Xayiraadaha Socdaalka aan Muhiimka ahayn ee Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mexico » Waxyeellada Dalxiiska Meksiko ee Xayiraadaha Socdaalka aan Muhiimka ahayn ee Mareykanka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • Wararka Mexico • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dalxiiska Meksiko wuxuu dhaawacay xayiraadda safarka ee aan daruuriga ahayn ee Mareykanka
In kasta oo Dawladda Meksiko ay u oggolaanayso socdaalka dalka, xayiraadaha safarka dibedda waxaa adeegsanaya Mareykanka.
Meksiko waxay dareemi kartaa lumitaanka socotada Mareykanka maadaama xayiraadaha COVID-19 ay sii jiraan
Sanadka 2020, Mareykanka ayaa ugu badan ku kharash gareeyay safarada dibedda ah iyadoo celcelis ahaan qarashka deggane kasta uu dhan yahay $ 3,505.
Kanada waxay ahayd suuqa labaad ee ugu kharashaadka badan Mexico oo leh $ 1,576 qofkiiba.
Kolombiya waxay ahayd suuqyada saddexaad ee ugu kharashaadka badan iyada oo $ 1,286 qofkiiba uu deggan yahay.
Socdaalka aan muhiimka ahayn ee ka soo gudba xadka dhulka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Meksiko weli waa la xaddiday 17 bilood laga bilaabo bilowgii masiibada COVID-19 tanina way yeelan kartaa saameyn xun waayo, Warshadaha dalxiiska ee Mexico.
Warbixintii ugu dambeysay waxay daaha ka qaadaysaa in 2020, the US waxay ku bixisay inta badan safarka dibedda iyadoo celcelis ahaan qarashka degganaha oo dhan $ 3,505. Canada wuxuu ahaa suuqa labaad ee ugu kharashaadka badan $ 1,576, waxaa ku xigay Kolombiya oo leh $ 1,286.
In kasta oo Dawladda Meksiko ay u oggolaanayso socdaalka dalka, xayiraadaha safarka dibedda waxaa adeegsanaya Mareykanka. Maaddaama Mareykanka uu yahay suuqa ugu sarreeya ee kharashaadka ugu badan ee booqdayaasha, si weyn uga horeeya suuqyada kale ee muhiimka ah sida Argentina, Kolombiya iyo Boqortooyada Midowday, warshadaha dalxiiska ee Mexico waxay dareemi doonaan xaddidaadda safarka aan muhiimka ahayn ee Mareykanka.
Sida laga soo xigtay sahan dhowaan la sameeyay, socdaalayaashu waxay diyaar u yihiin inay safraan masaafo dheer, oo laga yaabo inay Mexico ku tiirsanaato. Sahanka ayaa lagu ogaaday in 1,442 ka mid ah jawaabeyaasha caalamka, 37% ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay safar caalami ah ku tagaan qaarad kale. Waqtiga gaaban, warshadaha dalxiiska ee Meksiko ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay ku tiirsanaadaan suuqa fasaxa dheer, iyagoo bartilmaameedsanaya kuwa badbaadiya masiibada iyagoo raadinaya 'liis baaldi', safar COVID-19 kadib.
Si kastaba ha noqotee, warshadaha dalxiiska ayaa wali laga yaabaa inay markaa ku dhibtoonayaan inay magdhabaan luminta socdaalka Mareykanka ee kharashka badan. Sannadkii 2020 83% dhammaan dadka yimid Mexico waxay ka yimaadeen Mareykanka, taasoo muujineysa ku -tiirsanaanta waddanka ee suuqa dibedda ee Mareykanka.
In kasta oo xayiraadaha hadda jira, Mexico ayaa laga yaabaa inay la kulanto qulqulka booqashooyinka saaxiibbada iyo qaraabada (VFR) ee Mareykanka marka si buuxda loo oggolaado, maadaama tani ay tahay dhiirrigeliyaha ugu sarreeya safarka labada dal. Dadka socotada ah, si kastaba ha ahaatee, waxay la kulmi karaan kor u kaca qiimaha hawada sababtuna tahay dalabka oo si kedis ah u kordhay. Si kastaba ha ahaatee, rabitaanka ah in la arko dadka aad jeceshahay waqti dheer ka dib waxay ku dhiirri -gelin doontaa dadka socotada ah inay bixiyaan qiimayaashan sare, iyagoo ka faa'iideysanaya shirkadaha diyaaradaha.